Waxsoosaarka sunta cayayaanka iyo soosaarayaasha budada ah - Shiinaha lagu daro walxaha sunta lagu buufiyo iyo kuwa alaabada siiya & Warshad
beeraha dhul diimeed dabiici ah oo bey'adeed u leh sunta cayayaanka ama cayayaanka loo buuxiyo
Guudmarka Faahfaahin Faahfaahin Degdeg ah Goobta Asalka: JIlin, Magaca Magaca Shiinaha: Dadi Magaca Badeecada: budada diatomite Fasalka: Muuqaalka fasalka cuntada: Awood Bixinta budada
kiimikada beeraha diatomite wax ku oolka ah cayayaanka lagu daro budada
Guudmarka Faahfaahinta Degdega ah CAS Maya.: 61790-53-2 / 68855-54-9 Magacyada Kale: Celite MF: SiO2.nH2O EINECS Maya.: 212-293-4 Meesha Asalka: Jilin, Gobolka Shiinaha: GRANULAR, Budada Nadiifnimada: SiO2> 88% Codsiga ...
Kiimikooyinka beeraha F30 TL301 diatomite ee wax ku oolka ah Cayayaanka lagu daro waxyaabaha diyoomaceous gaar ah
diatomite sunta cayayaanka lagu daro waxyaabaha qaaska ah ee budada cayayaanka lagu buufiyo ee cayayaanka
kiimikada diatomite kiimikada beeraha lagu daro dawooyinka cayayaanka lagu buufiyo
Guudmarka Faahfaahinta Degdegga ah Goobta Asalka: jilin, Magaca Magaca Shiinaha: Dadi Lambarka Moodalka: TL301 / F30 / TL601 Qoondaynta1: Kala-soocidda Cayayaanka3: Cabbirka Nidaamiyaha Kobaca Dhirta: 14/40/80/150/325 mesh PH: 5-11 ...
waxyaabaha lagu daro waxyaabaha sunta ah ee lagu buufiyo sunta cayayaanka
Dhulka diatomaceous waxaa badanaa lagu helaa dubista, qasida iyo darajaynta si loo helo alaabooyin qaabaysan, waxyaabaha ku jirana guud ahaan waxaa looga baahan yahay inay ahaadaan ugu yaraan 75% ama ka badan iyo maadada dabiiciga ee ka hooseysa 4%. Inta badan dhulka diatomaceous waa culeys fudud, yar yar oo adag, fudeyd in la burburiyo, liidata isugeyn, hooseeya cufnaanta budada qalalan (0.08～0.25g / cm3), wuxuu dul sabeyn karaa biyaha, qiimaha pH waa 6～8, waxay kufiican tahay soosaarida budada qoyan. Midabka diatomite wuxuu la xiriiraa daahirnimadiisa.
dawada sunta cayayaanka ee khaaska ah ee lagu daro budada cad
Carrier ama Filler waa shey aan firfircooneyn oo ka shaqeynaya sameynta sunta cayayaanka. Shaqadeeda ugu weyni waa in la hubiyo waxa ku jira sunta cayayaanka ee ku jirta maaddooyinka la warshadeeyay oo lagu kala firdhiyo maaddooyinka firfircoon ee daroogada asalka ah ee lagu daray waxyaabaha lagu daro iyo maaddooyinka kale. Isku-dhaf isku mid ah ayaa loo sameeyay si loo ilaaliyo kala-baxa iyo dheecaanka sheyga; isla mar ahaantaana, waxqabadka badeecada waa la hagaajiyay, waana la isticmaali karaa ka dib markii lagu qasi karo biyo si badbaado leh oo habboon.
shaqeynta qoynta waxay kudarsantahay sunta cayayaanka ee gaarka ah ee lagu buufiyo sunta cayayaanka
Dhulka Diatomaceous waa dhagaxa si ballaaran loo qaybiyey, kaas oo si fudud loogu shiidi karo budada isla markaana leh nuugid biyo oo xoog leh. Waa guri-baahsan ama cayayaan-dil beerta. Dhulka diatomaceous wuxuu dili karaa cayayaanka. Farsamadeeda ugu weyn ee ficilku waa in lagu dilo cayayaanka iyada oo loo marayo falcelinta jirka. Sababta ayaa ah in dhulka diatomaceous-ka ay sameysmayso dhigida qolofka lagu dhajiyay diatoms. Noolaha noocan ahi wuxuu leeyahay qolof fiiqan sida cirbadda oo kale.
diatomite F30 TL301 Cayayaanka lagu daro waxyaabaha qaaska ah ee budada cad / casaanka ah
budada dila cayayaanka oo leh qiimaha ugu wanaagsan ee warshadda diatomite budada cayayaanka
Guudmarka Faahfaahinta Degdega ah CAS Maya. 61790-53-2 / 68855-54-9 Magacyada Kale: Celite MF: SiO2.nH2O EINECS Maya. 88% Codsiga: ...
Warshad siisa budada cayayaanka lagu buufiyo ee diatomite
diatomaceous diatomite Earth budada cayayaanka lagu dilo cayayaanka qiimaha ugu fiican